Soosaarayaasha & Alaab-soosaarka Eyga | Warshadda Xakamaynta Eeyaha Shiinaha
Suunka Badbaadada Eyga oo leh Suunka Suunka
Suunka badbaadada eeyga oo leh suunka kursiga wuxuu leeyahay aag si buuxda loo huwiyey.
Suunka badbaadada eeyga oo leh suunka kursiga ayaa hoos u dhigay mashquulka darawalka. Qalabka amniga eeyga ayaa ku haysa eeyahaaga si aamin ah kursigooda si aad diirada u saarto wadada inta aad safreyso.
Suunka badbaadada eeyga oo leh suunka kursiga waa sahlan tahay in la xidho oo la iska bixiyo. Dusha ka saar madaxa eyga, ka dibna kor u xir, oo hagaaji xarkaha sida aad rabto, ku dheji suunka badbaadada D-ring oo xir suunka kursiga.
Nylon Mesh Dog Xarig
Qalabkeena eyga ee nashqadeynta neefta leh ee neefsashada ka sameysan wuxuu ka sameysan yahay maadad waarta oo qafiif ah.Waxay u oggolaaneysaa ilmahaaga inuu ku sii socdo socodkaas aadka loogu baahan yahay iyaga oo aan kululeyn.
Waa mid la hagaajin karo oo leh xirmo balaastig ah oo dhakhso leh iyo D-ring si loogu dhejiyo xadhigga lagu daray.
Xarigga eyga mesh ee mesh wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo kala duwan iyo midabbo kala duwan ah. Waxay ku habboon yihiin dhammaan eyda.
Xirmada Custom ee Eeyaha
Marka eeygaagu jiido, suunka caadada u ah eeyaha wuxuu adeegsadaa cadaadis dabacsan oo ku saabsan laabta iyo garbaha garbaha si uu eeygaaga dhinac ugu jeediyo oo uu dareenkiisa dib kuugu soo celiyo.
Xirmada caado eeyaha ayaa ku hooseysa lafta naaska halkii cunaha laga saari lahaa ceejinta, qufaca, iyo xanjada.
Xirmada caadada eeyaha ayaa laga sameeyay naylo jilicsan laakiin xoog badan, waxayna leedahay xargo dhaqso ah oo deg deg ah oo ku yaal xargaha caloosha, way fududahay in la xidho oo la xidho.
Xirmadaan caadada u ah eeyga waxay ka niyad jabineysaa eeyaha inay jiidaan xarigga, socodka wuxuu kuu sahlayaa adiga iyo eeygaaga inaad ku raaxeysato.
Eyga Taageerada Qaadista Xariga
Qalabkeena kor u qaadista taageerada eeyga ayaa ka samaysan waxyaabo tayo sare leh, waa mid aad u jilicsan, neefsan kara, fudud oo la dhaqi karo isla markaana dhaqso u qalajin karo.
Qalabka kor u qaadista eeyga ayaa waxbadan kaa caawin doona marka eygaagu uu jaranjarada kor iyo hoos u sii socdo, uu ka boodo ama ka baxo baabuurta iyo xaalado kale oo badan. Waxay ku habboon tahay eeyaha leh gabow, dhaawac ama dhaqdhaqaaq xadidan.
Qalabkan kor u qaadista taageerada eeyga ayaa fududahay in la xidho. looma baahna talaabooyin aad u tiro badan, kaliya isticmaal xiritaanka balaaran & balaaran ee Velcro si aad uhesho ama aad uga baxdo.
Milicsiga No jiid Doonta la habeeyo
Xirnaashaha Eygan jiidaya ayaa leh cajalad milicsan, wuxuu ka dhigayaa xayawaankaaga inay u muuqdaan baabuurta waxayna ka caawinayaan ka hortagga shilalka.
Suumanka si fudud loo hagaajin karo iyo maro laba-geesle ah ayaa jaakada si raaxo leh ugu haysa meesha iyadoo ka saareysa buunshaha iyo u adkaysiga xidhashada dharka ilaalinta.
Muuqaalka aan lahayn eeyaha wax soo jiidaya ayaa ka samaysan naylo tayo sare leh oo neefsan kara oo raaxo leh. Markaa waa mid aad u ammaan badan, adkeysi leh oo casri ah.